Kaspersky KIS + KAV One Time Full Activation without Key - MYSTERY ZILLION
Kaspersky KIS + KAV One Time Full Activation without Key
Kaspersky ကသုံးရတာ ကောင်းပေမယ့် Crack ရတာခက်လို့ ပြောင်းသုံးတော့မှာလား?
လက်ရှိ Activate လုပ်ထားတဲ့ key က blacklist ဖြစ်သွားပြီလား? expire ဖြစ်သွားပြီလား?
Key အသစ်ရှာရတာခက်လား? ရတဲ့ link တွေက Rapidshare ကဖြစ်နေလို့ download လုပ်လို့မရဘူးလား?
ခက်ခက် Download လုပ်ထားတဲ့ key က compatible မဖြစ်လို့ ဒါမှမဟုတ် expire ဖြစ်သွားလို့ စိတ်ရှုတ်နေလား?
Trial Resetter ကိုသုံးရတာ Malware တွေများပါမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်ရလား? တစ်လတစ်ခါ ဟိုဖွင့်ဒီလုပ်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်လား?
.........လား? .........လား? .........လား? .........လား? .........လား?
ဒါဆိုရင်တော့ ဒီ post ကိုဖတ်မိတာမှန်သွားပြီ
Kaspersky Anti-Virus ပဲဖြစ်ဖြစ် Internet Security ပဲဖြစ်ဖြစ် Key မလိုပဲ Activation လုပ်တဲ့ နည်းလေးပါ (Internet connection တော့လိုတာပေါ့နော်)
အရင်ဆုံး Download လုပ်ထားတဲ့ Installer နဲ့ Kaspersky Antivirus/Internet Security ကို install လုပ်။
Activate လုပ်ဖို့မေးလာရင်တော့ "Activate Later" ကိုရွေးလိုက်ပါ။
အကယ်ရွေ့install လုပ်ပြီးသား Key နဲ့ Activation လုပ်ထားပြီးသားဆိုရင်လည်း အဲဒီ key ကို အရင် delete လုပ်လိုက်ပါ။
ဒီ Post မှာပြထားတဲ့ပုံတွေက Kaspersky Anti-Virus 2010 နဲ့ ဖမ်းထားတဲ့ Screen Capture တွေဆိုပေမယ့် ဒီနည်းက Kaspersky Product တွေအကုန်လုံး (2008 နှင့်အထက်) ဆိုရင်သုံးလို့ရပါတယ်။
ကဲ အခုဘာမှစမလုပ်ခင် Internet ကို Disconnect လုပ်ထားလိုက်ပါ။ (တကယ်တမ်း တော့မလိုဘူးထင်တာပဲ၊ ကျွန်တော် လုပ်တုန်းကတော့ Disconnect မလုပ်မိပေမယ့် အားလုံးအဆင်ပြေသွားတာပဲ)
ဒါပေမယ့် Better safe than sorry တဲ့
Kaspersky ကို install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Crack လုပ်ရင်ဒုက္ခပေးမယ့် Setting တွေအရင်ပြောင်းရပါမယ်
Settings ထဲက ဘယ်ဖက် အပေါ်ဆုံး Protection ကိုနှိပ်ပြီးရင် ညာဖက်ခြမ်းမှာ "Enable Protection" ဆိုတဲ့ box ကို uncheck လုပ်ပေးပါ
ပြီးရင် ဘယ်ဖက်ခြမ်းက Option ကိုနှိပ်ပြီးရင် ညာဖက်က "Enable Self Defense" နဲ့ "Disable external service control" ကို Uncheck လုပ်ပါ
အားလုံးပြီးလို့ OK button ကိုနှိပ်ပြီးရင် "Protection is disabled" ဆိုတဲ့ pop up box လေးတက်လာပါမယ်။ အရေးမကြီးပါဘူး X နှိပ်ပြီးသာပိတ်လိုက်ပါ။
Internet ကို disconnect မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ "Connections Terminated" ဆိုတဲ့ countdown timer လေးပေါ်လာပါမယ်။ "No" ကိုရွေးပါ။
အကယ်ရွေ့ ဒီSetting တွေကိုသာ Change မထားဘူး ဆိုရင် Kaspersky ရဲ့ Registery တွေကိုဝင်ပြင်တဲ့အခါ Kaspersky က block လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။
ကဲ လိုရင်းစပြောတော့မယ် Run box ဖွင့် (Windows + R). Type "regedit". Click OK or hit enter.
2009 version ဆို ဒီကိုသွား
2010 version ဆို ဒီကိုသွား
64 bit OS တွေအတွက် Vista x64 OS or Win7x64 ဆို
ညာဖက် pane က underline တားထားတဲ့ "ProductStatus" ဆိုတဲ့ value က ကျွန်တော်တို့ change ရမယ့် value
"ProductStatus" ကို double click "Edit String" ဆိုတဲ့ box ပေါ်လာရင် Value Data ကို "Release" ကနေ "Beta" လို့ ပြောင်း
ပြီးရင် OK button နှိပ်
"ProductStatus" ရဲ့ value က ဂလိုပြောင်းသွားလိမ့်မယ်
အခု သင့်ရဲ့ Kaspersky ကို Full Version ကနေ Beta Version ပြောင်းပြီးသွားပြီ
Q : ဟင် ဒါဆိုပိုနိမ့်သွားတာပေါ့
A : မနိမ့်သွားပါဘူး Product ရဲ့ Status ကသာ Beta ကို change သွားတာပါ။ Anti-Virus Engine တွေ virus definition တွေ function တွေ ကတော့အရင်အတိုင်းပဲ။ Beta version ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် Beta updates တွေ လုပ်လို့ရတယ့်အတွက် ပိုလို့တောင် protection ကောင်းသွားသေး (ပြောတာပဲ : P )
ကဲကဲ အားလုံးပြီးရင် registry editor ပိတ် Kaspersky ပြန်ဖွင့်
Q : ဟင် အရင်အတိုင်းပဲ "License Not Found" ပဲပြနေတယ် update လည်းလုပ်လို့မရသေးပါလား?
A : မလောနဲ့လေ Activation လုပ်ဖို့ကျန်သေးတယ်
ပထမဆုံး option တွေ အရင်အတိုင်းပြန် change
"Enable Protection" ကိုပြန်ဖွင့်
"Enable Self Defense" နဲ့ "Disable external service control" ကောပဲ
အားလုံးပြီးရင် internet ဖြုတ်ထားရင် ပြန် connect လုပ်
ပြီးရင် system tray က Kaspersky window ကို right click
Activate ကို ရွေးလိုက်ရင် Activation Window ပေါ်လာမယ်
အရင်နဲ့မတူတာက 2nd option က "Activate beta version" ဖြစ်နေလိမ့်မယ်
အဲဒီ "Activate beta version" ကိုရွေး
ဒါဆိုရင် program က online ကနေ activating လုပ်ပါလိမ့်မယ်
ဒီအပေါ်ကလိုမျိုး "The key file is not compativle with this application" message box ပေါ်လာရင် စက်ကို Restart ချလိုက်ပါ
Restart ချပြီးလို့ Activate ပြန်လုပ်ရင်တော့ အပေါ်ကပုံလို အားလုံးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်
Kaspersky Server ကနေ 1 month beta key ပေးပါလိမ့်မယ်
Q : ဟင် တစ်လပဲလား?
A : တစ်လထဲ မဟုတ်ပါဘူး တစ်လကုန်သွားရင် နောက်တစ်ခေါက် "Activate beta version" ဆိုတာကို click လုပ်ရုံနဲ့ နောက်ထပ် 1 month beta key ထပ်ရမှာပါ။ Life Time ပေါ့ (Kaspersky Server က ဒီ bug ကို ဂရုမစိုက်ပဲ Beta Key တွေပေးနေသရွေ့ပေါ့)
Update လုပ်ရင်လည်းပြဿနာ မရှိပါဘူး
Kaspersky Windows Title bar ပေါ်မှာ "BETA VERSION" ဆိုတာနဲ့ "!!! NOT FOR SALE !!!" ဆိုတာလေးပေါ်လာတာတစ်ခုပဲ (ဒါလည်း ဂရုစိုက်စရာမှတ်လို့ ဘာအရေးလည်း အလကားသုံးရပြီးရော ဟုတ်ဘူးလား)
ကျန်တာအားလုံးက Full Version အတိုင်း အဆင်ပြေပါတယ်
ကဲ အခု kaspersky က fully activated နဲ့ fully updated ဖြစ်သွားပြီ
key expire ဖြစ်သွားရင် "Activate beta version" ကိုသာနှိပ် One month Beta Key အသစ်တစ်ခုရမယ်
Q : ဘာတွေရေးထားမှန်းလည်း မသိဘူး မြန်မာလိုရေးတာ နားမလည်ဘူး ထောက်ထောက်ကြီးနဲ့
A : ဒါဆိုရင်တော့ မူရင်း Forum က post ကိုသာသွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ
Q : အဆင့်တွေကရှုပ်နေတာပဲ one click patch လေးများမရှိဘူးလား
A : ဒါဆိုရင်တော့ riodude's Patch ကို အောက်က link တစ်ခုခုမှာ download လုပ်လိုက်ပါ
လုပ်ပုံ ကအတူတူပါပဲ Patch ကတော့ အားလုံးကို automatic လုပ်သွားတော့ ဟိုဟာဒီဟာလိုက်လုပ်ပေးစရာမလိုဘူးပေါ့
Remarks[/URL] : ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် လုပ်တော့ Malware တွေဘာတွေ သံသရဖြစ်စရာမရှိတော့ဘူးပေါ့ မဟုတ်ရင် သူ့ Program က Back end မှာဘာတွေလုပ်နေလဲ ကိုယ်သိတာမှတ်လို့
riodude's patch ကို တချို့ Antivirus တွေက trojan အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့်သုံးရတာ စိတ်မလုံဘူးဆိုရင်တော့ Back end မှာဘာတွေလုပ်နေလဲ သိရတဲ့ Patch တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။
ဟို Patch လို Fully Auto တော့မဟုတ်ဘူး။ Partially Auto ပေါ့။
Batch Programming နဲ့ Registery နည်းနည်းပါးပါးသိတဲ့သူဆို ဒီ batch script က ဘာတွေလုပ်ပေးလည်းသိမှာပါ
Disclaimer - This note is copied from Warez-bb.org Forum for your information. All credits goes To the original writer iTz ReHaB @ warez-bb.org, NOT TO ME. I shall not have any liability or responsibility to you for any loss, damage, expense or injury you may sustain through your reliance upon information obtained from or through my note in respect of the consequences of anything done or omitted to be done by such person in reliance, whether wholly or partially, upon this post.
ကျတော်လဲ အမှတ်မထင်တွေ့ထားတာလေးပြော ချင်လို့.... အိမ်ကစက်ဗျာ... အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မရှိဘူး အဲ ဒါပေမဲ့ကျတော်ဆိုတဲ့ကောင်ကလဲ မစူးစမ်းစဆင်ချဉ်ပဲနဲ့ kasper2010 ကိုတင်လိုက်တယ်အိုခေပဲ activate လဲလုပ်ရောဂွပဲ ဟီးးး :D:D trial လိုင်စင်လုပ်ပြီး trial reset လုပ်သုံးမှာလေ... အဲ့ဒါနဲ့ activate later နဲ့ဆော်လိုက်တယ် ကိုမက်ကွန်ကျူတာ ပြောသွားသလိုပါပဲ စာတန်းထိုးသွားတယ်.. "နော့ဖော်ဆေး" တဲ့ :D:D အဲ့ဒါနဲ့ကျတော်လဲ အပ်ဒိတ်ကို ကိုယောင်စိန်ပေးတဲ့ offline updater လေးနဲ့ယူတယ် အိမ်က နော့ဖော်ဆေးကြီးကိုအဲ့ကနေအပ်ဒိတ်လုပ်တယ် အပ်ဒိတ်တော့ဖြစ်တယ်ဗျာ.... activate မလုပ်ရသေးလို့ဆိုပြီးနီနေတယ်... အကောင်တွေသတ်ပေးမပေးတော့စမ်းရသေးဘူး :D:D
သတ်တော့သတ်ပေးမယ်ထင်တယ် ဗျ.. အဲ့လိုသာသတ်ပေးရင်တော့ ကပ်စပါကို လိုင်စင်မလိုပဲ သုံးလို့ရပီ နော့ဖော်ဆေးနဲ့ဟီးးးးး:D:D:D စမ်းသပ်စဲမို့ပါ...တကယ်အကောင်တွေသတ်ပေးနိုင်ရင် ထပ်ပြောပါ့မယ်... ကပ်စပါကို offline မှာ လုံး ဖရီးသုံးဖို့ အတွက် စမ်းနေတာပါ.. :D:D
အဲ့ဒါနဲ့ activate later နဲ့ဆော်လိုက်တယ် ကိုမက်ကွန်ကျူတာ ပြောသွားသလိုပါပဲ စာတန်းထိုးသွားတယ်.. "နော့ဖော်ဆေး" တဲ့ :D:D အဲ့ဒါနဲ့ကျတော်လဲ အပ်ဒိတ်ကို ကိုယောင်စိန်ပေးတဲ့ offline updater လေးနဲ့ယူတယ် အိမ်က နော့ဖော်ဆေးကြီးကိုအဲ့ကနေအပ်ဒိတ်လုပ်တယ် အပ်ဒိတ်တော့ဖြစ်တယ်ဗျာ.... activate မလုပ်ရသေးလို့ဆိုပြီးနီနေတယ်... အကောင်တွေသတ်ပေးမပေးတော့စမ်းရသေးဘူး :D:D
ပုံမှန်တော့ Activate မဖြစ်ရင် Update ပေးမလုပ်ပါဘူး။
Update ပေးမလုပ်တာနဲ့ Message box တွေ တ တောင်တောင်ပေါ်လာတာကလွဲရင် အားလုံး ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ပါတယ်
Virus တွေ့ရင်လည်း ရှင်းပေးပါတယ် (တခြား Anti-Virus တွေလို ရှင်းပေးစေချင် Activate အရင်လုပ် ဆိုတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူး)
offline updater ဆိုတာကို တစ်ခါမှမစမ်းဖူးလို့ Activate မဖြစ်ပဲနဲ့ Update လုပ်လို့ ရ မရ မသိပါဘူး
Offline User တွေအတွက်ကတော့ ကိုယောင်စိန် ရဲ့ Trial Period Reseter အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်မှာပါ
Mad Computerist wrote: »
offline update လုပ်တဲ့ဟာလေးပါကို မက်ကွန်ပျူတာ... သူက update .bat ရယ်update.exe ရယ် temp ရယ် ဖိုလ်ဒါနှစ်ခု ဘက်ဖိုင်တစ်ခု exe ဖိုင်တစ်ခုပါပါတယ်.. kasper မရှိတဲ့စက်ကနေလဲ update.bat ဖိုတာလေးရမ်းလိုက်ရင် အပ်ဒိတ်ဖိုင်တွေ ဆွဲပေးပါတယ်ဗျာ... အဲ့ဒီ က update ဖိုလ်ဒါလေးကို ညွှန်းလိုက်ပြီး ကပ်စပါအပ်ဒိတ်ဆာဗာကိုဖြုတ်ပြီး အပ်ဒိတ် လုပ်လိုက်ရင်ရပါတယ်ဗျာ....
ဒီနည်းကိုကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ပြီးပါပြီ..........
Internet Connection နဲ့ Beta Key ကိုတောင်းပြီး စမ်းသပ်ရာမှာ အခုလောလောဆယ် ၅ ရက် ကြာတဲ့အထိ အားလုံး အဆင်ပြေနေပါတယ်၊ နောက်လဲ အဆင်ပြေမှာပါ။
Full Version မခြား သုံးနိူင်တာမလို့ ဝမ်းသာစရာ သတင်းကောင်း လို့ ထပ်လောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်.............
ဒီ Thread ကိုရေးပေးတဲ့ အကို ကိုလဲ အလွန်ပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်............
အပေါ်က ပြသလို BETA ပြောင်းပီးပါပီ
program က online ကနေ activating လုပ်တဲ့အခါမှာ
ဒီ ERROR ကြီးဘဲ တက်နေတယ်
Activation Error: Server Name Can't be Resolved.
MPT user လားမသိဘူး။ အဲဒီလိုင်းမှာ အက်တီဘိတ်လုပ်လို့မရတတ်ဘူး ဘာလို့လဲသိဘူးဗျ။ အရင်ဆုံး DNS ဆာဘာကိုပြန်စစ်ကြည့်ပါဦး။ နောက်တနည်းက Primary DNS မှာ 203.81.71.69 ထားပြီးလုပ်ကြည့်ပါလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စမ်းကြည့်ပါဦး။
Yes, as Ko Yaung Sein said, it's due to the problem of the connection with the server. May be your connection is too slow (try when the connection is better) or your ISP block that server or port. (I am not sure cuz there's no such problem here.)
Hope you get it by doing the steps said by Ko Yaung Sein.
But, I can't try it.
Yes, I use MPT line with 512 ADSL.
Do u have another way?:D
Try Russia Proxy or something like that.
I hope Saturn god is better in that.
I am not familiar with those ways anyway.
Yes, take your windows box to any cybercafe or any neighbor who have bagan line.
And another way, you have to addakey and you should try with offline update. At that case you should remove blacklist file in your update files before update process. that will beasolution for some users. that trick was coming from Ko Prince Akarit. :5:
ကို Mad Computerist ရေ....
အစ်ကိုနည်းက ကောင်းလွန်းလို့ကျွန်တော် PDF ပြောင်းပြီး ifile မှာပြန်တင်လိုက်ပါတယ်....
ဒါမှ တခါပြောင်းတိုင်း အွန်လိုင်းတက်ရတဲ့ဒုက္ခကနေကင်းဝေးသွားရအောင်လို့ပါ....
That's ok to share my post.
I neither found out that way nor invented that way.
I am also translated one of the posts from Warez-bb.
It's justatyping that takes time.
I am glad if everybody gets OK and with the way I post.
Remarks : ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် လုပ်တော့ Malware တွေဘာတွေ သံသရဖြစ်စရာမရှိတော့ဘူးပေါ့ မဟုတ်ရင် သူ့ Program က Back end မှာဘာတွေလုပ်နေလဲ ကိုယ်သိတာမှတ်လို့
ကျွန်တော်အစ်ကိုပြောတဲ့အတိုင်း kaspersky 8 ကိုလုပ်တာ Code Activation Procedure Failed 1:2 ဆိုပြီး Error တက်နေပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကြံလေးပေးကြပါ။
Sorry, I've heard such situation and that kinda hacking seems fine in all of my friends and those who read and tried. (No difficulty was reported earlier)
Please restart and try again.
Feel free to let me know if the problem persists.
PS: It's not wise to quote the whole post of mine. + It's better to upload the error picture in some kind of picture hosting and insert image with that link. Not the link to the file in your local PC.